Wzọ 5 na Mbadamba ụrọ na-agbanwe Ahụmahụ Mgbasa Ozi | Martech Zone
Fraịdee, June 13, 2014 Thursday, June 12, 2014 Douglas Karr
Izu a, m na - azuta ihe n’ebe ana - ere ọgwụ CVS dị n’obodo anyị, ọ masịrị m nke ukwuu mgbe achọpụtara m, ihe ngosi mgbasa ozi juputara na vidiyo na ụda na - akwalite otu n’ime igwe eletrik. Unitlọ ọrụ ahụ dabara na shelf, anaghị ewere ohere buru ibu, ma nwee ndị na-ekwu okwu nduzi. Echere m na ọ gaghị adị ogologo oge tupu anyị ahụ ọdụ ụgbọ ala na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ọ bụla nke ụlọ ahịa ahụ iji nyekwuo nghọta na ngwaahịa ha na-akwalite.
Ihe omuma a site na Moki, otu ụlọ ọrụ na-enyere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ aka ịchekwa, soro ma jikwaa ngwa mkpanaka ha, na-enye nghọta n'ime ụzọ 5 pụrụ iche nke ahụ mbadamba na-ime nkwalite ụlọ ahịa na-azụ ahịa na ahụmịhe n'ụlọ ahịa:
Foto a n'ire - Kama ịkọ nkọ otú ngwaahịa si arụ ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ, vidiyo na mbadamba nkume na-enye ihe atụ ndị na-ahapụghị ihe ọ bụla n'echiche.
Ihe akara - akara ngosi dijitalụ ejiri na-eto eto na-ewu ewu, na-ekwe ka ndị ahịa na arụmọrụ na-eme ka ụzọ dị mma ha si eso mmekọrịta, ngosipụta mara mma.
In-store ngwaahịa ngosipụta - ikike igosipụta ihe dị iche na atụmatụ nke ngwaahịa na obere obere mbadamba karịa nnukwu ngosipụta nwere ike ilekwasị anya ma belata ngwongwo na ngosipụta ụlọ dị ndụ.
Ọrụ onwe onye ahịa - ndị ọrụ gị enweghị ike ịnọ ebe niile, mana kiosks mbadamba nwere ike ha ekwe ka ndị na-azụ ahịa nyocha ma chọta ozi ha chọrọ maka ahụmịhe ịzụ ahịa ka mma.
In-store ugwo nhazi - ahia gị monstrous, ochie, ridiculously oké ọnụ n'ókè nke ahịa usoro maka a mbadamba integrated online ka ugwo usoro, atọ ndị yiri nkata management, na-akọkwara…. na nkpirikpi nke nha na ugwo.
Tags: ahụmahụ ahịakiosk dijitalụdigital signagena-echerein-store ahụmahụkioskmokiebe ahịaretailahụmahụ ahịambadamba nkume
Seismic: Akwụkwọ na Ahịa Ahịa Dynamic